Ukungafani kombala omhlophe kuvumela ukuyisebenzisa kunoma iyiphi ingaphakathi. Lo mbala awuthathi hlangothi, uhlanganisa kahle nayo yonke imibala. Ifulethini lanamuhla noma indlu ayikwazi ukucabanga ngaphandle kwamafasitela epulasitiki. Zacishe zishintshe ngokuphelele izinkuni.
Amawindi ama-White PVC (i-PVC) enziwe ngamakamelo angamakheli noma amafasitela amabili aphuziwe kabili. Amaprosesa asepulasitiki amhlophe athandwa kakhulu ngenxa yokusebenza kwawo okuhle kakhulu nentengo engabizi.
Uma ukhetha amawindi, qaphela ngokukhethekile:
izesekeli eziphezulu nezakhi;
Isigaba sephrofayli: isigaba A - ngodonga oluqinekile (ngamafasitela, iminyango, uhlaka lwezingqimba), isigaba B - ngodonga olungaphandle olulula, iphrofayli yento. I-Class B ishibhile kakhulu, kepha impilo yayo yesevisi ingaphansi. Futhi futhi izici ezimbi ezizinzile nezokugcina amandla, ukufakwa, impilo encane yokusebenza;
ububanzi bephrofayela: iphrofayli ye-classical ingamamitha angamashumi amahlanu nesishiyagalombili (i-Euroline). Kukhona namaphrofayli enwebukhulu obuphakanyisiwe bokuphakama - amashumi ayisikhombisa (Softline) namamithamitha angamashumi ayisishiyagalolunye (Alfaline).
i-glazing emibili emihle yeglasi eliphuziziwe;
ukufakwa kochwepheshe (uma kwenziwa ngabasebenzi abangakulungele, amafasitela angafakwa ngokungalungile, futhi ngokufanele, ayikho isiqinisekiso senkonzo yabo ehlala njalo).
Amafasitela amhlophe amapulangwe
Amawindi ezinkuni abiza kakhulu. Banezinzuzo eziningi ezaziwayo ngaphezu kwepulasitiki, kodwa banesici esisodwa: ngaphansi kwethonya lomswakama, isihlahla sishintshwa kancane kancane. Abakhiqizi banamuhla basebenzisa upende oluphezulu nezobucwebe ukuze banikeze ukuvikelwa okunokwethenjelwa kwezinkuni kusuka kumswakama kanye ne-ultraviolet. Uma uthathwa ngale ndlela, amafasitela amhlophe amapulangwe agcina ukubukeka kwawo okuhle kakhulu isikhathi eside - awakhuli futhi aphumeleki.
Ingaphakathi elimnyama nelomhlophe ekamelweni lokuphumula
Izindonga zokwahlukanisa ezilahleni
Isitofu sokugeza ngamandla akho
Izikhali zokukhishwa ngekhishi elenziwe ngamatshe okufakelwa
I-diode tape for plailing
Ungahlukanisa kanjani igumbi?
Ingaphakathi ngesitayela se-chalet - imibono elula futhi ewusizo lapho ukhetha ukuklama kwendawo
Tulle on the eyelets
Ukubukeza kwencwadi ethi "Ikhaya, Indlu Enhle - Umhlahlandlela Ofanekiselwe Umdwebo Ongaphakathi, uDeborah Needleman"
Ukwakha amathayili endlini yokugezela - inhlanganisela enhle kunazo zonke yemibala nezindlela zokubhala
Yiluphi uhlobo lwephepha lodonga lokukhetha ikamelo lokulala?
Izindlu ezisuka ezigodini - izici ezithakazelisayo zezakhiwo futhi ziqedile
Ukuduma ngo-Okthoba - izimpawu
Ukukhwabanisa ubusika 2018 - izitayela zezemfashini, ama-novelties, izitayela zokugcoba ebusika
Ishidi ku-Czech - iresiphi
Iyini ikhadi elihlakaniphile?
Yini esiza aspirin?
Yeka ukuthi ubugebengu bubukeka kanjani: izilwane ezingu-35, ngaphambi kokuthi unecala kakhulu!
Isobho ngaphandle kwamazambane
Amakhomitha wokulahleka kwesisindo
Ungakuqoqa kanjani i-mercury kusuka emgodini?
"I-dart" yaseMelissa McCarthy yabhalwa ngo-premiere we-comedy "Ghostbusters"
Ungakhetha kanjani amawindi wepulasitiki afanele?
Ukufakwe kwezinga ezimbili